132s Kutheni le nto amaRiphabhlikhi amane echasene ne-senate&#39;s coronavirus yokuvuselela umthetho images and subtitles
Isizwe sethu sakhelwe kwisidima somsebenzi. Yintoni eyenziwa yile bhili ngaphandle kokuyilungisa, Ngaba ithi unokufumana imali engaphezulu ngokuba ngumsebenzi kunokuba unokwenza ngelixa usebenza. Esi sisikhuthazo esiphambeneyo. Asinakuba sazimisela ukukhuthaza abantu ukungasebenzi nokwenza imali eninzi kunokubuyela emsebenzini kwaye ufumane umvuzo wakho oqhelekileyo. -Ukuhambisa le ntlawulo, intlawulo eyi- $ 600 ngaphezulu kwezibonelelo zikarhulumente Ngokwenyani ivumela abantu ukuba umvuzo wabo uphantse uphindwe kabini kwiimeko ezithile. Kwaye ndifuna ukunceda abantu. Ndifuna ukuqinisekisa ukuba, ukuba ulahlekelwa ngumsebenzi, Sigubungela umvuzo wakho. Kodwa phantsi kwalo mthetho usayilwayo, ufumana i- $ 23.15 ngeyure, esekwe kwiyure yomsebenzi engama-40, engasebenzi. Le yingxoxo malunga nokuba okanye hayi siza kwenza umthetho oyilwayo ongafakwanga kakuhle nkqonkqoza olu hlanga lunzima kwiinyanga ezizayo ngokwanda ngabom ukungaphangeli. Yiyo le mpikiswano malunga nayo. Ke sifuna ukwenza into elula. Sifuna ukulungisa izinto ezaphukileyo apha Ngokuthi izibonelelo zeinshurensi yokungaqeshwa kufuneka ibhalwe kwi-100% yomvuzo owawunawo ngaphambi kokuba ungaphangeli. Oku ayisiyonto nje yabantu esele yenziwe ingasebenzi. Oku malunga nabantu abaza kwenziwa bengasebenzi kwiiveki ezizayo. Lonke olu hlengahlengiso luthi sivote kwimizuzu embalwa kukuba kufuneka sithathe izibonelelo zokungaqeshwa nge-100 yeepesenti yomvuzo owawusawufumana ngelixa wawusebenza. -Sebenzisa le bhili, njengoko ibhaliwe ngoku, urhulumente uza kuhlawula abantu abaninzi baseMelika ukuba ngoncedo lukarhulumente kunokuba bebeya kwenza ukuba basebenza kwimisebenzi yabo eqhelekileyo. Ndiyxhasa ukwandisa inkqubo yeinshurensi yokungaqeshwa. Yeyona ndlela kwaye ikhawuleze yokufumana imali ebantwini abayifuna kakhulu. Kodwa akufuneki senze inkqubo apho izibonelelo zeinshurensi yokungaqeshwa ingaphezulu komvuzo. Asinakubhatala abantu ngakumbi ukuba bangasebenzi kunokuba basebenze. Oku sisiseko esiqhelekileyo esiqhelekileyo.
Kutheni le nto amaRiphabhlikhi amane echasene ne-senate&#39;s coronavirus yokuvuselela umthetho
< start="0.1" dur="5.1"> Isizwe sethu sakhelwe kwisidima somsebenzi. >
< start="5.2" dur="3.768"> Yintoni eyenziwa yile bhili ngaphandle kokuyilungisa, >
< start="8.968" dur="4.366"> Ngaba ithi unokufumana imali engaphezulu >
< start="13.334" dur="2.534"> ngokuba ngumsebenzi >
< start="15.868" dur="3.033"> kunokuba unokwenza ngelixa usebenza. >
< start="18.901" dur="4.433"> Esi sisikhuthazo esiphambeneyo. >
< start="23.334" dur="5.367"> Asinakuba sazimisela ukukhuthaza abantu >
< start="28.701" dur="3.432"> ukungasebenzi nokwenza imali eninzi >
< start="32.133" dur="5.167"> kunokubuyela emsebenzini kwaye ufumane umvuzo wakho oqhelekileyo. >
< start="37.3" dur="2.534"> -Ukuhambisa le ntlawulo, intlawulo eyi- $ 600 >
< start="39.834" dur="2.1"> ngaphezulu kwezibonelelo zikarhulumente >
< start="41.934" dur="3.4"> Ngokwenyani ivumela abantu ukuba umvuzo wabo uphantse uphindwe kabini >
< start="45.334" dur="1.733"> kwiimeko ezithile. >
< start="47.067" dur="1.2"> Kwaye ndifuna ukunceda abantu. >
< start="48.267" dur="2.866"> Ndifuna ukuqinisekisa ukuba, ukuba ulahlekelwa ngumsebenzi, >
< start="51.133" dur="2.334"> Sigubungela umvuzo wakho. >
< start="53.467" dur="4.9"> Kodwa phantsi kwalo mthetho usayilwayo, ufumana i- $ 23.15 ngeyure, >
< start="58.367" dur="3.2"> esekwe kwiyure yomsebenzi engama-40, engasebenzi. >
< start="61.567" dur="2"> Le yingxoxo malunga nokuba okanye hayi >
< start="63.567" dur="2.633"> siza kwenza umthetho oyilwayo ongafakwanga kakuhle >
< start="66.2" dur="3.467"> nkqonkqoza olu hlanga lunzima kwiinyanga ezizayo >
< start="69.667" dur="3.8"> ngokwanda ngabom ukungaphangeli. >
< start="73.467" dur="1.7"> Yiyo le mpikiswano malunga nayo. >
< start="75.167" dur="1.866"> Ke sifuna ukwenza into elula. >
< start="77.033" dur="2"> Sifuna ukulungisa izinto ezaphukileyo apha >
< start="79.033" dur="2.634"> Ngokuthi izibonelelo zeinshurensi yokungaqeshwa >
< start="81.667" dur="2.4"> kufuneka ibhalwe kwi-100% >
< start="84.067" dur="2.5"> yomvuzo owawunawo ngaphambi kokuba ungaphangeli. >
< start="86.567" dur="3.267"> Oku ayisiyonto nje yabantu esele yenziwe ingasebenzi. >
< start="89.834" dur="2.6"> Oku malunga nabantu abaza kwenziwa bengasebenzi >
< start="92.434" dur="1.5"> kwiiveki ezizayo. >
< start="93.934" dur="3.4"> Lonke olu hlengahlengiso luthi sivote kwimizuzu embalwa >
< start="97.334" dur="2.467"> kukuba kufuneka sithathe izibonelelo zokungaqeshwa >
< start="99.801" dur="4.332"> nge-100 yeepesenti yomvuzo owawusawufumana ngelixa wawusebenza. >
< start="104.133" dur="1.867"> -Sebenzisa le bhili, njengoko ibhaliwe ngoku, >
< start="106" dur="1.767"> urhulumente uza kuhlawula abantu abaninzi baseMelika >
< start="107.767" dur="1.7"> ukuba ngoncedo lukarhulumente >
< start="109.467" dur="2.434"> kunokuba bebeya kwenza ukuba basebenza kwimisebenzi yabo eqhelekileyo. >
< start="111.901" dur="3.7"> Ndiyxhasa ukwandisa inkqubo yeinshurensi yokungaqeshwa. >
< start="115.601" dur="2.399"> Yeyona ndlela kwaye ikhawuleze yokufumana imali >
< start="118" dur="2.133"> ebantwini abayifuna kakhulu. >
< start="120.133" dur="1.801"> Kodwa akufuneki senze inkqubo >
< start="121.934" dur="2.066"> apho izibonelelo zeinshurensi yokungaqeshwa >
< start="124" dur="2.334"> ingaphezulu komvuzo. >
< start="126.334" dur="3.133"> Asinakubhatala abantu ngakumbi ukuba bangasebenzi kunokuba basebenze. >
< start="129.467" dur="1.501"> Oku sisiseko esiqhelekileyo esiqhelekileyo. >